भरतपुर अस्पतालमा शिशु सघन उपचार कक्ष निशुल्क – Saurahaonline.com
भरतपुर अस्पतालमा शिशु सघन उपचार कक्ष निशुल्क
चितवन, ११ चैत । चितवनको सबैभन्दा ठूलो सरकारी अस्पताल भरतपुर अस्पतालमा सञ्चालन भएको नवजात शिशु सघन उपचार कक्ष (एनआईसियु) को सेवा निशुल्क गर्ने भएको छ ।
अस्पतालको सेवा विस्तार संगै एनआईसियु सेवालाई निशुल्क गर्न लागेको हो । अस्पतालको ५४ औ वार्षिकोत्सवको अवसरमा आईतवारदेखि यो सेवालाई निशुल्क गर्न लागिएको अस्पतालका अध्यक्ष राजकुमार राजभण्डारीले बताए । नवजात शिशु सघन उपचार कक्षमा १२ वटा वेड संचालन भएको छ भने ८ वटा वेड विस्तार गर्न लागिएको छ । एनआईसियुमा अत्यन्त संवेदनशिल भएका शिशुहरुको उपचार गरिन्छ ।
अस्पतालले आफै खर्च ब्यहोरेर भएपनि सेवा निशुल्क गरेको अध्यक्ष राजभण्डारीले जानकारी दिए । एक वर्ष अघि सुरु गरिएको सो सेवामा यसअघि शैयामात्र निशुल्क गरिएको थियो । एनआईसीयूको लागि निजि अस्पतालमा ५ देखि सात हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तै नवजात शिशुहरुको लागि उपचारका लागि छुट्टै कक्षमा सेवा सुरु गरिने भएको छ । १६ बेड क्षमता सहितको नवजात शिशुहरुका लागि सेवा सुरु गर्न लागिएको अस्पतालका मेडिकल सुपरीटेण्डेन्ट डा. रुद्रप्रसाद मरासिनीले जानकारी दिए ।
एनआईसियु र नवजात शिशु वार्डमा सबै सेवा निशुल्क गरिएको डा. मरासिनीको भनाइ छ । यसका लागि उपकरण र जनशक्ति थप गरिने मरासिनीले बताए । अन्यत्र भन्दा सस्तो र स्तरीय सेवा दिन थालेपछि सरकारी अस्पतालमा उपचारका लागि आउने बिरामी वर्षेनी बढ्न थालेका छन् । बच्चाको लागि अति आवश्यक एनआईसीयु सेवा चलाएपछि बिरामीहरुको लागि सहज भएको छ । निजी अस्पतालमा उपचार खर्च महंगो हुने भएपछि सरकारी अस्पतालप्रति बिरामीको आकर्षण बढेको हो ।